တရုတ်စျေးပေါရောင်းချခြင်းစျေးပေါကလေးစကူတာ / ဘီး2ကလေးတွေလက်ကိုင်နှင့်ကလေးစက်ဘီးထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများအတွက်အကောင်းဆုံးဆိုင်ကယ်နှင့်အတူ Scooter ကန် | အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့စက်ဘီး
ကလေးတွေစျေးပေါတဲ့ Scooter / Kid ဆိုင်ကယ်ဆိုင်ကယ် / ကလေးတွေကန်ကန်
၁၀၀၀၀ တစ်နေ့လျှင် Piece / Pieces ကလေးငယ်များအတွက်စျေးပေါတဲ့ဆိုင်ကယ် / ကလေးငယ်ဆိုင်ကယ်ဆိုင်ကယ် / ကလေးတွေကန်ကန်
1piece / box,4/ 6box / karton, En 14619 စျေးပေါသောကလေးငယ်ဆိုင်ကယ် / ဘီး ၂ စီးသည်လက်ကိုင်ကာတာနှင့်ကလေးစက်ဘီးအတွက်အကောင်းဆုံးဆိုင်ကယ်နှင့်အတူဆိုင်ကယ်ကန်။
အီးအက်စ်တီ။ အချိန် (နေ့များ) 30 ညှိနှိုင်းခံရဖို့
အရည်အသွေးကောင်းသည့်ကလေးငယ်များဆိုင်ကယ်: Scooter သည်ချောချောမွေ့မွေ့စီးခြင်းအသစ်ဖြစ်ပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာ ၂ ဘီးဆိုင်ကယ်ရှာခြင်းဖြစ်သည်။ ပေါ့ပါးသောဘီးများနှင့်ရောင်စုံဒီဇိုင်းများဖြင့်စတိုင်ကျစွာစီးပါ။ ကြာရှည်ခံစေရန်အတွက်တည်ဆောက်ထားသည့်ကြာရှည်ခံပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
ကြာရှည်ခံသည့်သံမဏိဘောင်နှင့်ချိန်ညှိထားသောလက်ကိုင်များ - Scooter ကိုနောက်ဆုံးပေါ်သံမဏိကိုယ်ထည်နှင့်သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကုန်းပတ်ဖြင့်တည်ဆောက်သည်။ ကလေးငယ်များနှင့်ပိုကြီးသည့်ကလေးများအတွက်လက်ကိုင်များကိုချိန်ညှိနိုင်ရုံသာမကအဆင်ပြေစွာကိုင်တွယ်နိုင်သည့်လက်ဆုပ်ကိုင်မှုများသည်စီးနင်းသောအခါအဆင်ပြေလွယ်ကူစေပါသည်။ 27.5 "မှ 32" နှစ်ခုချိန်ညှိအမြင့် settings ကို။
Grip tape ဖုံးအုပ်ထားသောကုန်းပတ်သည်အေးမြသောဒီဇိုင်းများ - ဘီးဆိုင်၌ Scooter အတွင်းရှိတည်ငြိမ်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအတွက်ချုပ်ကိုင်ထားသည့်တိပ်ခတ်ပါရှိသည်။ ထို့အပြင် Scooter ကိုအေးဆေးပြီးထူးခြားသောအသွင်အပြင်ကိုပေးသည်။ အဆိုပါ Scooter ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များကိုလာ; အပြာ၊ လိမ္မော်၊ ပန်းရောင်စသဖြင့်။ တစ်ခုချင်းစီသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားသည့်ချုပ်ကိုင်မှုဒီဇိုင်းပါ ၀ င်သည်။
ပေါ့ပါးသောဘီးများပါ ၀ င်သောနောက်ဘရိတ်ကိုအသုံးပြုရန်လွယ်ကူသည်။ လျင်မြန်စွာ၊ ဘေးကင်း။ လွယ်ကူစွာရပ်တန့်ရန်ဘီးစကူတာတွင်ကြီးမားသောသံမဏိနောက်ဘက်ဘရိတ်ရှိသည်။ သင်စီးနေစဉ်ဘီးနှစ်ခုလုံးလည်းထွန်းလင်းနိုင်သည်။
bearings ၅ ခုပါသည့် ၁၂၅mm ကြီးမားသောဘီးများ - ကျွန်ုပ်တို့၏ ၁၂၅ မီလီမီတာ PU ဘီးများနှင့်အရည်အသွေးကောင်း ၅ လုံးနှင့်အမြန်စီး။ ချောချောမွေ့မွေ့စီးပါ။
သင်ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ဝင်စားပါကသင့်အားအကောင်းမြင်တုံ့ပြန်မှုများပေးရန်သင့်အားစိတ်ရင်းမှန်ဖြင့်ဖိတ်ခေါ်ပါသည် pလှံတံucts. မင်းရှိရင် မဆို ကျေးဇူးပြု၍ အချိန်မရွေးဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ရောင်းပြီးနောက် မည်သည့်မေးခွန်းမဆိုs ထုတ်လုပ်မှု၏, ငါ့ကိုအီးမေးလ်သို့မဟုတ်ဖုန်းဖြင့်တိုက်ရိုက်အသိပေးပါ. Wအီးသည်ဤပြwithနာများကိုအချိန်မီကိုင်တွယ်နိုင်သည်။
Wအီးပြီးနောက် sal အပေါ်အာရုံစူးစိုက်င။ Welcome ကျွန်တော်တို့ကိုမဆိုမှတ်ချက်များပေးပို့ပါ။